Kuwo wonke umndeni lapho kukhona ingane, udinga ibhasikidi lamathoyizi. Ngezandla zakhe ukuzenza kusuka ezintweni ezingalungile akulula. Ngendlela, "imiklamo evela kudoti" namuhla ithandwa kakhulu. Loluhlobo lwezinsiza lubizwa ngokuthi "ukuvuselelwa".
Indlela esheshayo yokwenza ibhasikidi yamathoyizi
Uma kukhona i-arena endlini, okuyinto enesihawu ukuphonswa ngaphandle (futhi kuthiwani uma isebenza futhi?), Kungenziwa kalula "kwenziwe" ukusebenza ngisho noma umntwana usukhulile kakade. Eqinisweni, azikho izinto ezingadingekile uma umninimzi enombono othuthukile, ngoba ukwenza ibhasikidi yamathoyizi avela enkundleni yezemidlalo kuyindaba engathandeki!
Udinga nje ukuthatha indwangu enkulu, phakathi ukufaka isitela. Emaphethelweni alezi zinto zigqokisa kahle ifreyimu, zimboze indwangu ezungeze futhi ziqinisa izigqoko ezinezintambo noma okugxilisayo. Ngaphakathi kwe-artists ukuthungula ubhedu, okufanele bufanise nosayizi wawo. Ngasenqenqemeni lwebhokisi le-arena-bhokisi ungayikhipha i-ruche noma enhle, i-lace, ibhande.
Ibhokisi lekhadibhodi liyimpahla enhle yezandla!
Ungalahli amabhokisi amakhulu emva kokuthenga okuthile, ngoba ukwenza ibhasikidi yamathoyizi avela kuso kulula. Kungenzeka ukuthi amandla enze ukuphenduka okuphindaphindiwe kwe-scotch esihlalweni, bese nje unamathisele izithombe ezikhanyayo phezulu.
Kodwa amakhosi athile akanelisekanga ngezindlela ezilula. Bakha amakhadibhodi kusuka ezindlini zangempela, izindlu ezingenakuthola yonke into, futhi lapho amathoyizi "ahlala khona". Yiqiniso, ekwenzeni "amadolobha amadololi" anjalo umhlengikazi uzodinga ukubekezela okukhulu, ukukhuthaza kanye nekhono.
Ukulinganisa ubukhulu bebhokisi le-cylindrical of linoleum, elimbozwe ngendwangu
Ibhasikidi langempela lamathoyizi, elenziwe ngezandla, lingakwazi ukuvela ngokoqobo ezintweni ezingadingekile. Kwanele ukusika imininingwane ngokusho komdwebo ohlongozwayo. Isigqoko (sangasese) sinomkhawulo wokungalingani - lokhu kuyoba ukuphakama kwebhokisi. Kodwa ubude kuyodingeka ukuthi ibalwe ifomula, kulinganisa indawo engezansi yombuthano. Ilingana no-2X3,14Cradius wezansi.
Ungakwazi ukulinganisa umjikelezo ngokusebenzisa intambo. Ukusabalalisa ngokucophelela emaphethelweni ezansi, intambo inqunywe emgqeni. Lona ubude bexande, oluzoba ingxenye engxenyeni yebhokisi.
Ungabuyela emuva ngokukhipha umgwaqo kuqala. Ukuguqula i-tangle ube ipayipi, isethwe nge-butt ephephandabeni futhi ilandelwe kusuka phansi ngepensela. Lokhu kuyoba iphethini elingaphansi kwesilinda.
Uma zonke izibalo zenziwe ngendlela efanele futhi ukusika kwenziwa ngendlela efanele, ukuthunga ibhasikidi yamathoyizi ngeke kube nzima kakhulu.
Isigaba samakhosi sokuthunga ibhokisi le-cylindrical yamathoyizi
Kusukela ku-linoleum 2 izingcezu ziyadliwa.
Emaphethelweni enxande ahlanganiswe nomuntu othayiphayo noma othungwe ngentambo eqinile, isibonelo, umugqa wokudoba.
Kusuka kwendwangu, i-lining iyakunqunywa - futhi izingxenye ezimbili, umbuthano kanye nekontane.
Isuliwe kusukela kumgqomo "wepayipi", ukufaka ubuso obubonakalayo ngaphakathi.
Sula umbuthano ophansi ohlangothini olulodwa "lwepayipi" ukuze ingxenye engaphakathi ingaphakathi, futhi izingxenye zisekho. Le ngxenye akudingekile ukuphuma.
Kusukela ezingxenyeni ze jeans, sitchik, ingubo endala noma ezinye izinto ezigqamile zendwangu ziqoqa ohlangothini olungenhla lwe-casing. Izikwele, ama-rectangles noma ama-triangles zihlanganiswa ndawonye ukuze kutholakale i-canvas enesayizi efanayo nephethini. Kudingekile ukwenza isikhinyane (1 cm cishe) ngaphezu kwe-linoleum cylinder, ngoba iyokhishwa emzimbeni. Futhi ngezinye izikhathi zisetshenziselwa ukwakhiwa kwe-sealant, okwandisa ubukhulu be-casing.
Ukwenza ibhasikidi elihle lamathoyizi, ukuthunga isandla sakho emgqonyeni ongadingekile, uhlotshiswe phezulu nge-appliqué. Ungakwazi ukuthunga amapokhethi, izintambo, izinkinobho. Uma ufisa, isicelo singafakwa.
Sula "ithubhu" ye-casing, ngokufaka isikhumba phansi ngaphakathi. Kudingeka ukhethe izingcezu zendwangu ngendlela yokuthi ukuhlanganiswa kwamajoyina wezingxenye kufana nesigxobo esiyinhloko sendwangu.
I-bottom of the casing is sewn kanye lining.
Le ngxenye idinga ukuvela ukuze izigxobo zingaphakathi kwe-cylinder.
Ungasebenzisa i-sealant yomkhiqizo. Ngokuba yena ufanelana ne-sintepon, ingubo endala encane, i-plaid, indwangu yengubo. Okubaluleke kakhulu ukusetshenziswa kwe-sealant, uma i-casing yenziwe ngezinto ezincane kakhulu: i-chintz, isilikhi, i-spatula, i-raincoat njalonjalo. Kusuka kuwo, imininingwane ihlukaniswa ngokuhambisana nephethini efanayo, kodwa yenziwe ngokuphindaphindiwe.
Ungakwazi ukufaka uphawu lwe-sealant kuhlaka lohlangothi zombili. Ungayilungisa nge-stapler, uhlanganise "ipayipi" ye-linoleum.
Okokuqala ubeke umjikelezo we-linoleum nge-sealant ngaphansi kwe-casing.
Ngaphakathi kwe-cylinder ye-casing, i-cylinder ye-lining efakwe.
Emkhawulweni wezintambo ezingezansi zonke izingxenye zemisebenzi yezandla.
Manje udinga ukunamathisela uhlaka lwangasese phakathi kwe-casing kanye ne-lining.
Umkhawulo womkhiqizo uqiniswe, uhanjiswe nge-beika enhle.
Ibhokisi lamathoyizi onefolda ebhokisini lekhadibhodi
Ngokuvamile ekhaya kukhona ubukhulu obufanele bebhodi lebhodibhodi elisele ngemuva kokuthengwa kwanoma iyiphi imishini. Kulesi simo, kulula kakhulu ukwenza ubhasikidi ngamathoyizi ngezandla zakho. Uhlaka luvele lulungele, luhlala kuphela ukusika uhlaka, ukwesaba kanye ne-sealant.
Ukusebenzisa i-algorithm echazwe ngaphambilini yokukhiqiza ibhokisi le-cylindric for amathoyizi, inkosi ingakwazi ukushintsha kancane inqubo. Uma usebenzisa i-rectangle esikhundleni sombuthano we-casing, i-lining ne-sealant, khona-ke ngeke uthole amabhasikidi amancane okugcina amathoyizi. Phezulu ngezinye izikhathi bahlanza ukuphatha. Bese baphenduka zibe izikhwama ezinkulu, okuyinto elula ukuthatha nabo ekamelweni noma epikinikini.
Futhi uma ufaka ingqondo encane bese wenza ifasitela emabhokisini enetheni noma indwangu ebonakalayo ewekwe kuyo, gcoba umnyango esihlalweni, khona-ke amathoyizi anjalo angasetshenziswa njengezindawo zokudlala. Kodwa-ke, kufanele ususe konke okuphuma ebhokisini bese uyivula phansi.
Futhi ungenza ngaphandle kwesifuba nhlobo, uthatha uphawu oluqinile, ngokwesibonelo, kusuka kwengubo yendwangu. Khona-ke ibhasikidi lizobe lilula futhi lingenalutho elingenalutho. Kodwa uma wonke amathoyizi ephonswa kuwo, "iyokhula" phambi kwamehlo akho!
Amathiphu ama-needlewomen awazi ukuhlanganiswa
Kungabheka ibhasikidi elithambile elithambile lamathoyizi, uma i-casing ingenziwanga ngendwangu, kodwa ihlanganiswe noma ikhonjiwe. Futhi ungasebenzisa hhayi kuphela uhlamvu, kodwa futhi amashidi amadala kanye nezindwangu ze-duvet uthathe izibhande noma ngisho ne-pantyhose engenamandla.
Amatheyipi omfashini adinga ukusika u-2 cm ububanzi, uwafaka emgqeni owodwa. Ukuze usebenze inkosi kufanele uthathe hook enkulu kakhulu.
Kodwa ama-tights anqunywa ngokuvunguza, elula umdwebo omncane. Ngenxa yalokho, iphikisiwe ibe yitayipi - kusukela kule "fayili" futhi ihlanganise ukufakwa kwekhasi.
Iqoqo lezinqola zamathoyizi ezisuka kuzintambo
Bheka amabhasiksi okuqala amathoyizi ezingane, ngenhloso yokukhiqiza okuzohambisana ne-twine evamile njengaleyo e-mail ebopha amaphakheji.
Kulula kakhulu ukwenza ibhasikidi elinjalo. Udinga nje ukukhetha ifreyimu yesimo esidingekayo nosayizi noma ukwenze ngokwahlukana. Kuyoba kuhle uma ufihla ngokucophelela ngisho nebhodibhodi evamile. Kodwa ungazimela ngokuzimela ozimele ezivela enkuni, e-plinth, e-baguette noma ecingweni oluqinile. Izindonga ezitholakale zihlanganiswa ngokuthunga kanye nezintambo eziqinile.
Amabhasikidi we-Wicker ngamathoyizi
Namuhla izinto ezenzelwe inqubo yokugqoka zaba nemfashini kakhulu. Amabhasikidi e-Wicker amathoyizi ayenziwa ngezinto ezihlukahlukene: izintambo ze-willow, izibhamu zamaphephandaba, imivimbo ye-denim, izintambo ezihlukanisiwe, ama-harnesses kusukela endwangu endala njalonjalo.
Kumele kuqashelwe ngokushesha ukuthi izinto ezenziwe ngamagatsha wangempela - imivini yemifino, i-rattan - bukeka imangalisa kakhulu. Kodwa-ke, ukuphela kwemigqa yamagatsha kuyoba khona ngaphakathi ngaphakathi kwebhasikidi. Futhi kungakhathaliseki ukuthi inkosi izama ukuyifihla kanjani, ingalimaza ingane nganoma isiphi isikhathi. Ngakho-ke, ungakhethi ukukhetha kwakho kwalezi zinto.
Abaningi bayakuthanda ukusuka emathinini ephephandaba. Kungase kubonakale kubonakala kunzima ukuhlukanisa nezinto ezivela emvelweni. Kodwa amabhasikithi anjalo awaqine. Yebo, futhi ugeze kakhulu kunzima.
Kodwa ucingo oluthambile oluthile lokuhlukanisa umbala luzoba yinto enhle kakhulu yokuloba. Qala umsebenzi kufanele ube phakathi nendawo ezansi. Kungcono ukuthatha indandatho enamandla, okumele ifake imisebe yamagcekeni ocingweni, alingana nokuphakama kwebhasikidi kanye nomkhakha wezansi. I-"duck" eqhubekayo - ucingo oluzohlanganiswa ne-base yonkana. Usembuthweni wesibonelo se-checkerboard bese ubeka umugqa ngemuva kwakhe.
Uma ufisa, ungahlanganisa ngisho nomdwebo usebenzisa izinto ezinemibala ehlukahlukene.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi noma iyiphi into ingane ezoyisebenzisa kufanele ibe ephephile ngangokunokwenzeka!
Indlela yokwenza umshini wokushisa ngezintambo ngezandla zakho?
Buggy ukuthi ungakwenza kanjani wena ngokwakho? Buggy ngezandla zakho - iziqephu
Indlela yokwenza i-mehmod eyenziwe ngokwenzayo
Indlela yokwenza umkhonto ngokwakho
Georgian kharcho Inkukhu: iresiphi elula besifazane abasha
Art kusukela esikhathini eside esidlule: cross-Stitch Wabasaqalayo
PC machine gun. Izibhamu Modern. PK machine gun
Radiowave wesibeletho coagulation: nemithelela kanye nokubuyekeza
Nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu Oriental: Tiger. Unyaka we-Tiger, Tiger isici ozalwa ngonyaka
Ukuhlaziywa kwezomnotho okuphelele komsebenzi wezomnotho ngaphansi kwezimo zokungaqiniseki kohlobo lwenhlangano
Indlela ukupheka gravy ngoba pasta
Isikhunta ku izinzipho yezandla: incazelo weni nasekwelapheni tifo